Hwehwɛ Yehowa ansa na n’abufuw da no aba (1-3)
Hwehwɛ trenee ne ahobrɛase (3)
“Ebia wɔbɛbɔ mo ho ban” (3)
Atemmu a wɔde bɛba aman a atwa wɔn ho ahyia no so (4-15)
2 Monka mo ho mmoa ano, yiw, monka mo ho mmom,+Ɔman a mo ani nwu ade.+ 2 Atemmu a wɔahyɛ ato hɔ no nnya mmae yi,Ɛda no nnya ntwaam sɛ ntɛtɛwa yi,Yehowa abufuhyew nnya mmaa mo so yi,+Yehowa abufuw da no nnya mmaa mo so yi, 3 Monhwehwɛ Yehowa,+ asaase sofo a mobrɛ mo ho ase* nyinaa,A mudi n’ahyɛde* a ɛteɛ so no. Monhwehwɛ trenee, monhwehwɛ ahobrɛase.* Ebia wɔbɛbɔ mo ho ban,* Yehowa abufuw da no.+ 4 Efisɛ wobegyaw Gasa kurow no ato hɔ,Na wɔbɛsɛe Askelon pasaa.+ Wɔbɛpam Asdod awia ketee,Na wɔatu Ekron ase.+ 5 “Mo a motete mpoano, Keretifo man, asɛm ato mo!+ Yehowa ne mo wɔ asɛm. O Kaanan, Filistifo asaase, mɛsɛe wo,Na obiara renka. 6 Mpoano asaase no bɛdan mmoa adidibea,Baabi a nguanhwɛfo mmura wɔ, baabi a wɔde abo ayɛ nguammuw. 7 Na ɛbɛyɛ Yudafo a aka no asaase,+Na ɛhɔ na wobedidi. Wɔbɛdeda Askelon afi mu anwummere. Na Yehowa wɔn Nyankopɔn betwa n’ani abɛhwɛ wɔn,Na ɔbɛboaboa wɔn nkurɔfo a wɔakyere wɔn kɔ no ano, na ɔde wɔn asan aba.”+ 8 “Mate Moab animtiaabu+ ne Ammonfo adapaatwa no.+Wɔyeyaw me man, na wɔde ahantan ka sɛ wobegye me man asaase.+ 9 Enti mete ase yi de,” asafo Yehowa Israel Nyankopɔn no asɛm ni,“Moab bɛyɛ sɛ Sodom,+Na Ammon ayɛ sɛ Gomora.+Ɛbɛyɛ nsasono asaase, ne nkyene amoa, na ɛbɛsɛe a obiara rentena hɔ bio da.+ Na me nkurɔfo a aka no bɛfom wɔn nneɛma,Na me manfo a aka no begye wɔn asaase afi wɔn nsam. 10 Wɔn ahantan nti na eyinom nyinaa bɛto wɔn,+Efisɛ wɔyeyaw asafo Yehowa man, na wɔmomaa wɔn ho so kyerɛɛ wɔn. 11 Yehowa ho bɛyɛ wɔn nwonwa,*Efisɛ ɔbɛbrɛ asaase so anyame nyinaa ase,*Na nsuano aman a ɛyɛ amanaman no de nyinaa bɛkotow* no,+Obiara befi baabi a ɔwɔ aba. 12 Mo, Etiopiafo nso, mede me sekan bekunkum mo.+ 13 Na ɔbɛteɛ ne nsa akyerɛ atifi fam na wasɛe Asiria.Ɔbɛma Niniwe asɛe pasaa,+ na ɛhɔ bɛwo wosee sɛ sare so. 14 Mmoa nyinaa, wura mu mmoa nyinaa bi bɛba abɛda hɔ. Na nsu so dabodabo ne kɔtɔkɔ bɛdeda n’adum* so anadwo. Wɔbɛte nnomaa su* wɔ mfɛnsere mu. N’apongua bɛsɛe,Na ɔbɛma sida nnua a wɔde ayɛ ɔdan no mu no ho ada hɔ. 15 Ahantan kurow a na ne ho adwo no no ni,Kurow yi na na ɛka wɔ ne komam sɛ, ‘Mene no; m’akyi no, obiara nni hɔ bio.’ Hwɛ sɛnea ɛnnɛ wadan biribi huhuuhu,Baabi a wuram mmoa bɛda! Obiara a obetwam wɔ hɔ no bɛtɛɛ n’anom ahwɛ,* na ɔbɛpoma twɛre.”+
^ Anaa “mudwo.”
^ Nt., “n’atemmu.”
^ Anaa “odwo.”
^ Anaa “wɔbɛkora mo so.”
^ Anaa “bɛyɛ wɔn hu.”
^ Anaa “ɔbɛma asaase so anyame nyinaa afonfɔn.”
^ Anaa “bɛsom.”
^ Anaa “n’adum ntaaso.”
^ Anaa “wura mu mmoa su; mframa a ɛreyɛ dede.”
^ Nt., “Obiara a obetwam wɔ hɔ no bɛhwɛ abɔ hwirema.”